नवराज कुँवर काठमाडाैं, ३१ वैशाख
अफिसमा काम गर्दा गर्दै रातको ११ बज्यो । घरमा ‘खाना बनाउनू’ भन्न भुलिएछ । भोकले पेट बटार्यो । सहकर्मी श्यामजीले बानेश्वरको पीपलबोटमा ठेलामा खानेकुरा खान पाइने बताए । नजिकै भएकाले त्यहाँ जान समस्या पनि थिएन । बुद्धनगरबाट हामी त्यसतर्फ हिँड्यौं । सडकबत्ती बिग्रिएकाले राजधानीको मुटु मानिने बानेश्वर सडक कान्तिविहीन थियो ।
श्यामजी त यो ठाउँ र सडकसँग परिचित नै थिए । मचाहिँ बानेश्वरका लागि नयाँ नै हुँ । त्यसैले सडकको खाल्डोमा भरिएको पानीले मलाई तान्यो । लड्दैपड्दै पीपलबोट पुगियो ।
आधा दर्जनजति ठेला थिए, जहाँ मःम, ससेज, चिकेन, लेगपिसदेखि चाउचाउ र चाउमिनसम्म राखिएका थिए । ठेलाका मालिकचाहिँ अधिकांश युवा नै थिए । एउटा ठेला पसल कम्तीमा दुईजनाले मिलेर चलाउँदा रहेछन् । राति साढे ११ हुन लागेको थियो । त्यति राति पनि ‘भोकाउने’हरुको संख्या बढी नै हुँदो रहेछ । एकछिन अघि मलाई लाग्दै थियो कि यति राति खानेकुरा खोज्दै हिँड्ने हामी निकै कम भोकामध्येका दुई हौं ।
हामीले मःम माग्यौं, दुई प्लेट । निकै स्वादिष्ट थियो । हामीले अरु दुई प्लेट अर्डर गर्यौं । तर, यसपटक एकजना सई आएर ठेलावालालाई थर्काए ।
‘नटेरेको हो ?’ उनले जंगिँदै भने, ‘उठाएर फ्याँकिदिनुपर्ला नि ।’
त्यसपछि ती पसले हतारिँदै कुर्सी र बेन्च भेला गर्न थाले । हामीलाई भाग लगाउन लागेको मःम अर्को भाँडोले छोपे । हामीलाई अचम्म लाग्यो । श्यामजीले ती ठेलावालालाई सोधे, ‘भाइ पुलिसले किन बन्द गराउन खोजेको हो ?’
ठेलाको भाइले सामान्य ढंगमै उत्तर दियो, ‘१२ बजेपछि सधैं बन्द गराउँछ पुलिसले ।’
केही जवानसहित आएका ती प्रहरी नायब निरीक्षकले अरु ठेला पसलेलाईलाई पनि बन्द गर्न आदेश दिँदै गए । प्रहरीले ठेला बन्द गराउनुको कारण के होला भन्ने जिज्ञासाले मलाई पोल्न थाल्यो । यो जिज्ञासा मेटाउन हामी ती सई भएतिर गयौं । श्यामजीले उनलाई सोधे, ‘सर किन बन्द गराउँदै हुनुहुन्छ यो ठेलाको व्यापार ?’
ती सईको जवाफ थियो, ‘रातभरि किन खोल्नुपर्यो, जाँड खाको मान्छे आउँछ, झैझगडा हुन्छ ।’
मैले तुरुन्तै सोधें, ‘जाँड खाएको मान्छेले गर्दा यो ठेला नै बन्द गरिदिने ? अरुले जाँड खान्छ यसको के दोष ? उसले जाँडरक्सी त बेचेको होइन नि !’
नजिकैको प्रहरी भ्यानतिर देखाउँदै उनले जवाफ दिए, ‘ऊ त्यहाँ डीएसपी सा’प हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर सोध्नू ।’
भ्यानमा बसेका डीएसपीतिर लम्कियौं । तर, भ्यान अगाडि बढिहाल्यो । मैले १०० मा फोन गरेर तीनकुनेका डीएपीको नम्बर मागें । त्यसपछि मैले उनलाई सोधें, ‘आखिर यो ठेलालाई तपाईंहरु किन रातभर चल्न दिनुहुन्न ?’
उनले जवाफ दिए, ‘हामीले बन्द गराएको होइन, हामीलाई जे आदेश आउँछ, कार्यान्वयन गर्ने हो ।’
उनले पनि सुरक्षा चुनौतीकै कुरा गरे ।
ठेला नजिकैको दोहोरी साँझमा गीत घन्किरहेको थियो, ‘बोतलको पानीले आँखा सन्काइ नानीले ।’ गेटमा गेटपाले थिए, अझै पनि त्यहाँ खासगरी ‘अर्धबैंसे युवा’को आवतजावत भइरहेको थियो । ‘फ्रेस’ छिरेकाहरु ‘खुट्टा बटार्दै’ निस्किँदै थिए भने सायद खुट्टा बटार्ने लक्ष्यसहित फ्रेसहरु छिर्दै थिए । दायाँपट्टि दुई प्रहरी जवान बसेका थिए । मानौं उनीहरु त्यो रोधीघरको सुरक्षार्थ खटाइएका हुन् ।
हामीले एकछिन त्यहीँ बसेर हेर्ने निर्णय गर्यौं । ठेलाहरु उठिसकेका थिए ।
दोहोरी साँझ छिप्पिएर ‘दोहोरी रात’ भइसकेको थियो । रातको १ बज्न केही मिनेटमात्रै बाँकी थियो । दोहोरी चलिरहेकै थियो । फरक यति हो, अहिले गेटमा पाले थिएनन् । छिर्नेहरु पनि कम नै थिए । तर, खुट्टा बटार्दै निस्कनेहरु ज्यादा थिए । ठेला राखेको ठाउँ ठेलावालाहरुले सफा गरिसकेका थिए । केही कुकुर आएर त्यहाँ सुँघ्दै थिए । त्यही कुकुरको छेउमा गएर ती ‘खुट्टा बटार्ने’हरु चाहिँ ‘सुसु’ गर्दै थिए ।
ती सब दृश्य देखेपछि निन्द्रा लाग्यो । हामी फर्किंदै थियौं । बानेश्वर हाइट छेउमा प्रहरी भ्यान भेटियो । ‘यति राति कहाँ गएर आउनुभा’ ?’ एकजना हवल्दारले सोधे ।
मैले जवाफ फर्काएँ, ‘ड्युटीबाट सर ।’
उनले अर्को प्रश्न गरे, ‘यतिबेला केको ड्युटी हो ?’
मैले पनि सोधें, ‘किन र , तपाईंचाहिँ अफ ड्युटीमा हो र ?’
ती हवल्दारले भने, ‘हैन यति राति पनि के काम हुन्छ र भनेर सोधेको हो ।’
‘ल, सर हामी गयौं, अरु केही सोध्नु छ भने सोधिहाल्नुस्,’ श्यामजीले भने ।
‘ल जानुस्,’ ती हवल्दारले ‘आदेश’ दिए ।
इजरायल गएका बेला किन्नरेट कलेजको निर्देशक ओरेन डेभिडले भनेको सम्झिएँ, ‘तिमी नेपालीहरु १८/२० घण्टा काम गर्ने कुरा सुन्दा अचम्म मान्छौं । दिउँसो आराम गरेर राति काम गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनौं । हामीकहाँ १८/२० घण्टा काम गर्नु सामान्य हो ।’
फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मञ्चे भाषण दिगागमा गुन्जियो, ‘१० वर्षभित्र ५ लाख युवालाई रोजगारी दिइनेछ, आर्थिक समृद्धिको जग ठड्याइनेछ ।’
जहाँ काम गरिरहेका युवालाई गएर सुत भनिन्छ, एउटाको गल्ती देखाएर अर्कोलाई सजाय दिइन्छ, १८/२० घण्टा काम गनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन, त्यहाँ समृद्धि भन्ने शब्द राखेर सुन्दर भाषण छाँट्ने काम भइरहेको रहेछ । दूधमा सोडा देखाएर सिल गरिन्छ, रक्सीको विषादीलाई क्लिन चिट दिइन्छ ।
दुर्व्यसनले खाने त हो भनेर एक खिल्ली चुरोटमा व्यापारीले ठगिरहेको ४ रुपैयाँप्रति चुपचाप बसिन्छ अनि गाडीको सहचालकले दुई रुपैयाँ नपुग्दा बेइज्जत गर्छ । फिर्ता माग्दा छैन भन्छ । तर पनि लुरुक्क परेर गाडीबाट झरिन्छ । नयाँ व्यवस्था भनेर जनताको ढाड सेक्ने गरी कर असुलिन्छ । तर, अर्बाैं भ्याट छल्नेले राजनीतिज्ञलाई चलाउँछन्, त्यहाँचाहिँ समृद्धिको भाषण राम्रैसँग बिक्दो पनि रहेछ । सायद समृद्धि र समाजवादको भाषण बिक्ने नै यस्तै मुलुकमा होला ।
अहिले त कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने जिम्मेवारी उसैले पाएको छ । भनिन्छ, कम्युनिस्टहरु साम्यवादी हुन् । साम्यवादी व्यवस्थामा समतावादी र वर्गविहीन समाज स्थापना गरिन्छ ।
जहाँसम्म मेरो बुझाइ सही छ, गरिबलाई धनीकै लेभलमा पुर्याएपछि आर्थिक समानता आउँछ भन्ने मर्म साम्यवादको हो । हामीकहाँ त धनीलाई गरिब बनाएर समता स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको रहेछ ।
हैन भने जँड्याहाका कारण मजदुरी गरेर खानेको जोस किन मारिन्छ ? यस्तै हो भने समृद्धिको भाउ बढ्नेछ र कुष्टरोगसम्बन्धी कार्यक्रममा हो वा गीत विमोचन समारोहको भाषणमा समृद्धि भन्ने शब्द छिराउने नेताका भाषण पनि ‘कुरूप’ हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोआज भन्न थालेका छन्, ‘समृद्धिबाटै समाजवाद ।’
कस्तो समृद्धि ? कुन समाजवाद ? समाजवादको बाटो पहिल्याउन कति वर्ष लाग्छ ? यसको ठोस सिद्धान्त, नीति तथा राजनीतिक दृष्टिकोण के हो ? कांग्रेसको समाजवाद के हो ? नेकपाको समाजवाद के हो ? अरु पार्टीको समाजवाद कस्तो हो ? खै स्पष्ट पारेको ?
इटालियन तानशाह बेनितो मुसोलिनी भनेका थिए रे, समाजवाद एक धोकाधडी, एक कमेडी, एक फोकट विचार, एक ब्ल्याकमेल हो । के हामीकहाँ मुसोलिनीको यो तर्क पुष्टि हुँदै गएको हो त ?
स्वदेशमै केही गर्छु भनेर दिउँसो जागिर र साँझ व्यापार गर्छु भन्ने युवालाई गएर सुत भन्ने छेउकै ‘मालदार’ दोहोरी, डिस्कोका ‘हर्कत’ चाहिँ नदेखेजस्तो गर्ने प्रवृत्तिलाई जनकल्याण नीति (समाजवाद) भन्न मिल्छ ? यसरी आउँछ समृद्धि ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६, ०२:३२:००